थाहा खबर: साँस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुर्‍याउँदै बाँदर
साँस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुर्‍याउँदै बाँदर
काठमाडौं : बाँदरका कारण काठमाडौंलगायतका ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा क्षति पुग्न थालेको छ।
उपत्यकाका पशुपति, स्वयम्भू, पाटन दरबार, साँखु बज्रयोगिनी, गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर, नीलबाराही, उपत्यका बाहिरका बडिमालिका, बराहक्षेत्र, कालीगण्डकीको राम्दीलगायत स्थानका सम्पदामा अध्ययनपछि यस्तो निष्कर्ष निस्केको हो।
मानिसको सौहार्द र बढी खाना पाइने भएकाले सम्पदा क्षेत्रमा क्षमताभन्दा बढी बाँदर छन्। हाल पशुपतिमा ४५०, स्वयम्भूमा ४५०, साँखु बज्रयोगिनीमा १०० र नीलबाराहीमा ७० को हाराहारीमा बाँदर रहेको यससम्बन्धी अध्ययनमा लागेका डा. मुकेश चालिसेले जानकारी दिए।
ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण सम्पदामा बाँदरले क्षति पुर्‍याए पनि सरोकार भएका निकायले यसको संरक्षणमा खासै ध्यान दिएका छैनन्।
गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरको झिँगटी र काठ बाँदरले खसालेर पानी चुहिने बनाएको छ। पानी परेका बेला मन्दिरभित्र बसेर पूजा गर्न नसकिने पुजारी जगदीश भट्टले बताए। झिँगटीको छाना बाँदरले फालेर ऐतिहासिक मन्दिरमा क्षति पुग्न थालेपछि यसै वर्ष महायज्ञ गरी पित्तलमा सुनको लेप लगाउने अभियान सुरु गरिएको छ।
ललितपुरमा रहेको पाटन दरबार क्षेत्रमा पनि बाँदरले झिँगटी झारेर क्षति पुर्‍याएको छ। ललितपुर महानगरपालिका सम्पदा संरक्षण शाखा प्रमुख चन्द्रशोभा शाक्य एउटा झिँगटी बाँदरले खसालेपछि त्यही बाटोबाट चाङका चाङ खसेर समस्या हुने गरेको बताए। बाँदरले सम्पदा भत्काउने बाटो बनाएपछि झिँगटी, काठ, माटोजस्ता संरचना खस्न थाल्छन्।
पाटनको कृष्णमन्दिर अघि बाँदरले झिँगटी खसाल्न थालेपछि लामो समयदेखि पर्यटक जान छाडेको अध्ययनका क्रममा भेटिएको अनुसन्धाता चालिसेले बताए। बढी पर्यटक आउने क्षेत्रमा बाँदर समस्या बनेपछि महानगरपालिकाले के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको शाखा प्रमुख शाक्यले जानकारी दिए।
पशुपति क्षेत्रमा जङ्गल रहेकाले तुलनात्मक रूपमा यहाँका सम्पदामा बाँदरले धेरै असर गरेको छैन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल जैविक विविधताका लागि बाँदर आवश्यक रहेकाले अन्यत्र सार्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन्।
‘दाताको सहयोगमा पशुपति क्षेत्रमा बाँदरका लागि भोजनस्थल, जलस्थललगायत संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने, ‘प्राकृतिक रूपमै बाँदरलाई बस्न दिए यसले मानिस र सम्पदामा असर गर्दैन, हाल पशुपति क्षेत्रमा थेग्न नसक्ने सङ्ख्यामा बाँदर छैनन्, मेरो कार्यकालमा अन्त पठाउँदिनँ।’
एक दशकअघि पशुपतिका बाँदर राजधानीसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका जङ्गलमा लगेर छाडिएको थियो। पशुपतिबाट लगेर छाडिएका बाँदरले ती जिल्लामा दुःख दिइरहेका छन्।
लुम्बिनी क्षेत्रमा नीलगाई र हाँसबाट सम्पदा जोगाउनुपर्ने समस्या आइपरेको छ। २० देखि ३० सङ्ख्यामा भए प्राकृतिक रुपमा राम्रो हुनुका साथै पर्यटकलाई आकर्षणसमेत गर्छ। धेरै सङ्ख्या भएर सम्पदामा क्षति गर्न थालेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
सम्पदा क्षेत्रमा बढेका बाँदरलगायत जनावरको व्यवस्थापनका लागि वन विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले काम गर्नुपर्ने चालिसेको भनाइ छ। धेरै भएकालाई चिडियाखानामा राख्नुका साथै अनुसन्धानमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सम्पदा संरक्षणको जिम्मेवारी लिएको पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर बाँदरका कारण सम्पदामा क्षति पुगेकाले समाधानको उपाय खोजी गर्नुपर्ने बताउँछन्। झिँगटीको छाना भएका सम्पदामा बढी क्षति पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ।